‘पुर्ण गुरुङ्ग बचाऔं’अभियानमा सहयोग गर्न लोक तथा दोहोरी गित प्रतिष्ठान जापान शाखाको अनुरोध – Rangin Sansar Nepal Entertainment Portal
‘पुर्ण गुरुङ्ग बचाऔं’अभियानमा सहयोग गर्न लोक तथा दोहोरी गित प्रतिष्ठान जापान शाखाको अनुरोध
टिचिङ अस्पताल काठमाण्डौ भित्र बेडमा पल्टिरहेका गाएक तथा सङ्गितकार पुर्ण गुरुङ्गको भिडियो हेर्दा धेरै जना भावविह्वल भएका छन । जिवनभर सङ्गितकर्ममा लागेका पुर्ण गुरुङ्ग मृगौलामा आएको समस्याले गर्दा अस्पतालमा छट्पटाएर बस्नुपरेको छ । आफ्नि श्रीमतिले रुँदै हारगुहार गरिरहेकी छिन र भनिरहेकी छिन् ‘मेरो श्रीमानलाई बचाइदिनुस प्लिज’ अब त आफुसङ्ग भएको सबै सम्पत्ती सकियो र बेच्नको लागी पनि केही छैन । यस्तो दृश्य देख्ने जोकोहिको मनमा यस्तो भाव आउँछ कि भगवान पनि कत्ती निष्ठुरी रहेछन् ।
काठमाण्डौमै बसेर लामो समयदेखी गित एरेन्ज र गाएनमा लागेका पुर्ण गुरुङ्गलाई यतिबेला बज्रपात परेको छ । २ श्रीमति रहेका पुर्ण गुरुङ्गका आफ्ना छोरिहरु भेट्न आउँदा निकै खुशी भएको बताउँछन । उपचारको निम्ती १५-२० लाख खर्च लाग्ने तर अहिले आफुसङ्ग औषधी किन्नेसमेत पैसा नभएकोले सहयोगको निम्ती आग्रह गरिएको छ ।
यसैबिच कलाकारको निम्ती कलाकारले नै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उधेश्यले राष्ट्रीय लोक तथा दोहोरी गित प्रतिष्ठान जापानले ‘सङ्गितकार पुर्ण गुरुङ्ग बचाऔं अभियान’ सुरु गरेको छ । भर्खरमात्र नयाँ कमिटी गठन भएको यस संस्थाले ५० हजार जती उठिसकेको र सबै जापानबासी नेपालिहरुले पनि सहयोग गरिदिनुहुन आग्रह गरेको छ । सहयोगको लागि खाता न. (१००५०-७४५००३० जेपी बैङ्क ) रहेको छ ।
एउटा गरीब परिवारको व्यक्ती जो जिवनभर सङ्गित सिर्जनामा लागेर आज त्यसरि तड्पिनुपर्दा धेरै कलाकारले अनुमान गरेका छन् कि, जिबन नै यसैमा समर्पित गर्नेहरु बिरामी पर्दा अस्पतालमा रुँदै बस्नुपर्ने हो त ? यस्ले धेरैलाई सोचमग्न बनाएको छ ।
जापानका एकल महिला र पुरुषलाई विवाह र मेलमिलापमा प्रोत्साहन
जापानका उदयमान कलाकारहरुले दशैँमा धमाका मच्चाउने